तपाईंको वफादारी कहाँ छ? | Martech Zone
सोमबार, अक्टोबर 31, 2011 मंगलवार, नोभेम्बर 1, 2011 Douglas Karr
वफादारी को रूप मा परिभाषित छ कसै वा कुनै चीजप्रति वफादार हुनु पर्ने गुण। के तपाईंले कहिल्यै याद गर्नुभयो? कसरी वफादारी छलफल हुन्छ, यद्यपि? हामी कसरी कुरा गर्छन् ग्राहकहरु वफादार छन्, कसरी कर्मचारीहरु वफादार छन्, कसरी ग्राहकहरु वफादार छन्, कसरी मतदाता वफादार छन् ...
रोजगारदाताहरूले कुरा गर्छन् कर्मचारी वफादारी, तर त्यसपछि तिनीहरूले बाह्य भाडामा लिन्छन्, आफ्नै प्रतिभाको आन्तरिक विकास गर्दैनन्, वा अझ खराब - उनीहरू वफादार प्रतिभा राख्छन्। किन छ उनीहरूको वफादारी केवल तल रेखा वा सेयर होल्डरमा?
राजनीतिज्ञहरूले अपेक्षा गर्छन् मतदाता वफादारी, तर त्यसो भए हामी पार्टीका लाइनमा मतदान गर्ने नेताहरू छान्छौं र कसले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ भनेर भुल्छ। किन छ उनीहरूको वफादारी उनीहरूको पार्टी अझ ठूलो हो कि उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्र?
कम्पनीहरूको बारेमा कुरा गर्छन् ग्राहक वफादारी, तर ती नयाँ प्राप्त ग्राहकहरु लाई अधिक ध्यान र विद्यमान भन्दा एक राम्रो सौदा प्रदान गर्दछ। कहाँ छ उनीहरुको अवस्थित ग्राहकहरु प्रति वफादारी? मलाई भिडियो मनपर्‍यो सहयोगी बैंक त्यो ग्राहक अधिग्रहण मा एक हास्यास्पद नजर लिन्छ
त्यसोभए किन हामी जहिले तलदेखि वफादारी मापन गर्छौं?
यस्तो देखिन्छ जब कुनै नेतृत्व व्यक्तिमा वफादारीको बारेमा कुरा गर्छ, उनीहरूले कुरा गरिरहेको हुँदैन उनीहरूको वफादारी, तिनीहरूले कसरी ग्राहक वा कर्मचारीहरू उनीहरूप्रति वफादार छन् भनेर कुरा गरिरहेका छन्। किन यो त्यस्तो तरिकाले काम गर्दछ? मलाई लाग्दैन कि यो हुनु पर्छ।
वफादारी मेरो लागि महत्वपूर्ण छ। जब कसैले मलाई आँखामा हेर्छ र तिनीहरूले मेरो हात हिलाउँछन्, म यसलाई कुनै कानुनी कागजात वा हस्ताक्षर भन्दा बढी मूल्य दिन्छ। जब कसैले यसमा जम्मा गर्दछ, एक विक्रेता वा पार्टनर जस्तै, म डाउनराइट गन्ध लाग्छ। यदि तिनीहरू आफ्नो वफादारी त्याग्न इच्छुक छन् भने, त्यहाँ केही पनि छैन जुन उनीहरूले पैसाको लागि पैसा लिने छैनन्। म त्यस्तो प्रकारको कम्पनीको साथ फेरि कहिले व्यापार नगर्ने मेरो तरिकाबाट बाहिर जान्छु।
केवल ग्राहकहरु मैले लगानी गरेकोमा पनि वफादारीको आशा गर्दछु। व्यवसायहरू प्रायः शुल्कहरू छुट दिन्छन् वा कम्पनीहरूका लागि हुप्स मार्फत उफ्रन्छन् जुन तिनीहरूसँग व्यापार गर्न चाहन्छन् - हामी भिन्न छैनौं। हामी अधिग्रहणको लागि छुट गर्दैनौं, तर प्राय जसो हामी अरू कम्पनीहरूसँग विकल्प नभएका कम्पनीहरूलाई स्रोतसाधन दान दिन्छौं। एक पटक उनीहरूको खुट्टामा उभिनेछन्, यद्यपि मेरो आशा यो हो कि उनीहरूले हामीले गरेको लगानीको लागि धन्यवादी हुनेछन् र तिनीहरू हामीसँग रहनेछन्। सत्य यो हो कि हामी यसलाई धेरै जसो देख्दैनौं। यस्तो देखिन्छ कि वफादारीको मृत्यु भएको छ।
यदि ग्राहकले हामीलाई राम्रो परिणाम दिईरहेको छ उनीहरूको नतिजा प्राप्त गर्न - र हामी गर्दैनौं - म आशा गर्दिन कुनै पनि वफादारी कि ग्राहक बाट जब हामी सम्झौताको हाम्रो अन्त पकड छैन।
सबै इमान्दारीताका साथ, मलाई लाग्छ कि विगत दुई वर्षमा भएका राजनीतिक जुलुसहरू सबै वफादारीको बारेमा छन्। मलाई लाग्छ अधिकांश मानिसहरूले खुशीसाथ धनी व्यक्तिको खल्तीमा बढी पैसा डुबाउँछन् ... तर हामी आशा गर्छौं कि तिनीहरू उपभोक्ताको रूपमा हामीप्रति वफादार हुनेछन्। स्टीव जॉब्स यसको एक ठोस उदाहरण थियो। हामीले नाफा मार्जिन र किनारको उत्पादनलाई माफ गर्‍यौं किनभने हामी, ग्राहकहरू राम्ररी हेरचाह गरिरहेका थियौं।
के तपाइँ तपाइँको विक्रेता र कर्मचारीहरु बाट अपेक्षा को रूप मा तपाइँको पार्टनरहरु र ग्राहकहरु लाई उही वफादार प्रदान गर्नुहुन्छ?